GTT International - Genève: GTT INTERNATIONAL GENEVE Nizara vary tao Toamasina - Sary
GTT INTERNATIONAL GENEVE Nizara vary tao Toamasina - Sary
Manoloana ny fandalovan’ny andro ratsy Giovanna sy ny mbola fisian’ny andro ratsy ao Toamasina, tsy nitazam-potsiny ny fikambanana GTTInternational Genève fa nitondra izay voatsirambin’ny tanana entina
hanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka tamin’ny alalan’ny fanomezana vary. Ny tolakandron'ny alahady 26 febroary no natao ny fizarana izany tao Ankirihiry Avaratra ka tokantrano miisa 70 avy amin’ny fokontany 7 samihafa no nahazo fanampiana.
Nanolotra izany tamin’ny anaran’ny birao foibe GTT International Genève ireo solontenan’izy ireo ao
Toamasina. Velom-pisaorana tamin’ izao ezaka nataon’ny fikambanana sy hetsika mifono fitiavana izao ireo rehetra nahazo ny anjarany satria na any an-tany lavitra tsy manadino ny mpiray tanindrazana ary miteny
ho azy hoy izy ireo ilay anarana entin’ny fikambanana Gasy Tia Tanindrazana.
Marihina fa ampahany voalohany ihany ity fanampiana natao tao Toamasina ity fa mbola ho avy ny any amin'ny Faritra Analanjirofo izay misy traboina ihany koa.
Interview Gynot - Radio RNA